SomaliTalk.com » 2012 » August » 06
Home » Archive Maalinta August 6th, 2012
Dowladda xalaal ah ma dhalan doontaa August 2012?
By: Sh. Xasan Jaamici, Soomaaliya xanuun badan baa haya wayna foolanaysaa . Waxaana la filayaa inay dhali doonto August 20, 2012 sida ay dhaqaatiirta qaar ka mid ah ay sheegeen. In kastoo aan shakhsiyan u arka uurkan ay Soomaaliya qaaday uu qasab ka sameysmay. Soomaalida badankeeda waxay walaac ka qabaan sida uu u ekaan doono iyo ciduu raaci doona waxa dhalan doona August 20, 2012 in saa Allah. Waxaan...
Ergeyga Gaarka ah ee Qarammada Midoobey u qaabilsan arrimaha Soomaaliya, Mahiga, ayaa faafiyey qodobadii ay ku heshiiyeen Saxiixayaashii Roadmapka ee shirka ku yeeshay Nairobi 4-5 Agoosto 2012. Qodobadaas oo ah siddeed (8) qodob oo ku qoran Af-ka Ingriisiga oo nuxurka guud ay tarjumtey SomaliTalk.com, ayaa waxaa kamid ahaa: Kulankii Saxiixayaashii (Roadmapka) oo ku saabsana nidaamka lagu dhamaystirayo...
Maxaa la gudboon madaxweynaha Agoosto?
Ma noqon doonaa madaxweynaha cusubi mid keeni kara xaaladlooga baxo marxalladda lagu jiro maanta? Shacabka Soomaaliyeed waxaa hor yaalla maanta hawlo badan ooku wajahan sidii xal loogu heli lahaa dhibaatooyin kala duwan oo muddo dheersoo jiitamayey. Dhibaatooyinka ayaa waxay u kala baxaan qaar la wada ogyahay oosi aad ah afka loogu hayo in xal loo helo iyo qaar aan si sahal lagu arki karinuna baahan...
Xildhibaan Ka Tirsanaa Baarlamanka Puntland oo Maanta lagu Dilay Magaalada Garoowe.
Wrarka naga soo gaaraya Magaalada Garoowe ee Magaala Madaxda Maamulka Puntland ayaa sheegay in Kooxo Hubaysani ay maanta Agoosto 6, 2012 halkaa ku dileen Xildhibaan ka tirsanaa Barlamanka Puntland. Xildhibaan la Dilay ayaa waxaa lagu magacaabi Jiray Xildhibaan C/salaan Sh. Maxamuud (Sheybe) kaasoo xilli uu ku sugnaa gudaha Magaalada Garoowe, kana soo baxay masjid, maanta subaxnimadii hore halkaa lagu...
Dood Cilmiyeed looga Hadlayay Sababaha loo Dilo Weriyayaasha oo ka Dhacday Xarunta Maamulka Gobolka Banaadir.
Dood Cilmiyeedkan oo ay soo qaban qaabisey Hay’adda CCD (Center For Community and Dialogue) ayaa waxaa ka soo qayb galay Qaybaha kala duwan ee warbaahinta ka hawl gasha magaalada muqdisha, Ururada Bulshada iyo Mati sharaf kale oo lagu casuumay ayaa waxaa looga hadlayay qodobo dhowr ah oo ay ka mid tahay Dilalalka Wariyayaasha. Dood Cilmiyeedkaas oo ay ka soo ayb galeen Mas’uuliyiinta Maamulka Gobolka...
Baaq kasoo Baxay Beelo kamid Ah Beesha sade oo ku saabsan nidaamka soo xulidda xubnaha baarlamaanka….
Baaqa ayaa Ka digey dhinac maridda nidaamka soo xulidda xubnaha baarlamaanka…. SHIR JARAA’ ID. Muqdishu, 06/08/2012 Ku: Hoggaanka dhaqanka ee Sade-Marreexaan Ku: Guddiga farsamada ee soo xulidda xubnaha baarlamaanka Ku: Guddiga khilaafaadka ee beelaha Soomaaliyeed Ku: Wasaaradda Arrimaha Gudaha/Amniga Og: Xafiisyada Ra’iisal-Wasaaraha/Wasiirka Maaliyadda Og: UNPOS/IGAD Og:...